I-ePR yoQhekeza ukuThengisa ... eYurophu | Martech Zone
I-ePR yoQhekeza ukuThengisa… eYurophu
NgoLwesine, Agasti 15, 2019 NgoMvulo, Agasti 19, 2019 ULuka Budka
I-GDPR yaziswa ngoMeyi 2018 kwaye yayilungile. Kulungile oko kuzolula. Isibhakabhaka asizange siwele kwaye wonke umntu wahamba malunga nosuku lwabo. Abanye bangaphazanyiswa kunabanye. Ngoba? Kuba iqinisekisa ukunikwa ngokukhululekileyo, imvume ethile, enolwazi nengacacanga ngoku iyafuneka kummi waseYurophu ngaphambi kokuba inkampani ibathumelele i-imeyile.
Khange zenze iingxilimbela zokuthengisa ezizenzekelayo zehlabathi, iiHubSpots, iiMarike njl.njl.
Ukuba uyayila, kwaye uyayifaka kwaye uyayinyusa, baya kuza!
Yenza umxholo weX10, yenze ngcono, ubhlog malunga nayo kwaye amathemba aya kuyifumana, uyikhuphele kwaye uza kuba neenkcukacha zonxibelelwano kwaye uya kuba nakho ukubakhulisa usebenzisa imikhankaso ye-imeyile ezenzekelayo kunye nezilumkiso eziyilelwe ukukwazisa xa zilungele ukuthenga (kuba ziya kuba kwiwebhusayithi yakho zijonga ezantsi komxholo wefaneli umz. izifundo zetyala, iidemo vids njlnjl.).
Ayisekho-hayi kwihlabathi le-B2C kunjalo. Xa bekhuphela umxholo we-x10 yintshatsheli, kwaye beshiya iinkcukacha zabo zonxibelelwano, kuya kufuneka baphawule ibhokisi encinci ethi:
Ndonwabile ukuba ungandithumelela i-imeyile ngamanye amaxesha ukuthengisa kunye nemiyalezo yokuthengisa.
Ke… ngubani oza kukhetha ngokuzithandela ukungena kwintengiso nakwimiyalezo yentengiso?
Kwaye ke umxholo wemveli / ukungena ngaphakathi / ukuthengisa nge-imeyile kutsala-ukukhulisa-ukulandelelana okusondeleyo ngoku kwaphukile kwintengiso ye-B2C.
Emva koko kwavakala isandi sokuhleka okungapheliyo.
"Yiyiphi loo ngxolo?”Batsho abathengisi be-B2C, iinyembezi zabo zinamabala ebusweni bejonge naphi na ukuthuthumbisa abakhohlakeleyo.
Yayiyingxolo yabathengisi be-B2B bekhwaza.
Uyabona i-GDPR ayikhange ikhubaze intengiso ye-imeyile ye-B2B (ebisoloko inesidima ngakumbi). Ngoku ufuna ubungqina bokuba unesiseko esisemthethweni sonxibelelwano lwe-imeyile ebandayo. Ngaba unokuba nemvume. Kodwa isenokuba… nomdla osemthethweni. Logama nje unoku:
… Bonisa indlela oyisebenzisa ngayo idatha yabantu ilungile, inefuthe elincinci labucala, kwaye abantu ngekhe bamangaliswe okanye banokuthi baphikise into oyenzayo…
IOfisi yeKomishinala yoLwazi, Imithetho ejikeleze ishishini kwintengiso yeshishini, i-GDPR kunye ne-PECR
Kwaye abathengisi be-B2B benza hay ngelixa ilanga likhanya.
Khange ikhanye ixesha elide nangona.
Ummiselo we-ePrivacy (ePR ngamafutshane) uza kuthatha indawo ye-European Directive ePrivacy Directive (etolikwa ngeendlela ngeendlela ezahlukeneyo kumazwe angamalungu e-EU- e-UK yaziwa njenge I-PECR).
The Ixelwe i-DMA ngoJulayi kunyaka ophelileyo ukuba i-ePR iya kufuna… 'cacisa ukungena ngemvume kuyo yonke intengiso ye-imeyile ye-B2B'.
Akukho luhlu lunye. Akusekho khuphela ngokutshintshela iinkcukacha zonxibelelwano. Sala kakuhle ukuthengisa nge-imeyile ye-B2B. Oku kukhulu.
Umzekelo, ndisebenza kumzi-mveliso we-IT we-UK kakhulu. Ijelo le-IT lakhiwe ngokusisiseko kuthungelwano lwe-imeyile. Uninzi lwamashishini e-B2B. Kuzo zonke iimpazamo zayo, isabonelela nge-ROI enyanzelekileyo nakwiinkampani ezininzi ezincinci, kuphela kohlobo lokuthengisa abacinga ukuba banokulufikelela (ngaphezulu koko kamva).
Kubo nabaphi na kuni abacinga ukuba lo mthetho uvakala ngokungathandekiyo kwaye ukuthengisa nge-imeyile ye-B2B kuya kuba kulungile, kufanelekile ukuba uqwalasele ifuthe le-ePR eya kuba nazo kwiicookies.
Nge-Matshi kulo nyaka, umcebisi ozimeleyo kwinkundla ephezulu ye-EU, u-Advocate General Szpunar, wakhupha i uluvo Kwicookies kwaye ngokusisiseko wathi ibhokisi ekhethiweyo yokuvuma yecookie ayizalisekisanga iimeko zemvume esemthethweni njengoko imvume ibingasebenzi kwaye inganikwanga simahla.
Zingaphi iiwebhusayithi ozindwendwelayo ngeebhokisi zamanqindi ezikhethwe kwangaphambili? Uninzi lwabo luchanekile?
Sijonge ngokwenyani kwikamva apho ungenakho ukuthumela i-imeyile ngabantu kwiinkampani (ngaphandle kokuba bayavuma) kwaye awungekhe ulandelele abantu xa bekwiwebhusayithi yakho (ngaphandle kokuba bangena kwiicookies). Izinto zekuki zesi siprofeto sele zenzekile e-UK: the I-ICO ithi imvume iyafuneka kwii-cookies ezingabalulekanga kwaye uyiqikelele, i-analytics iwela kanye kudidi olungabalulekanga (yiya kwiwebhusayithi ye-ICO - uhlalutyo lucinyiwe ngokungagqibekanga * ukukhutshwa kovalo *).
I-ePR bekufanele ukuba ikhutshwe ecaleni kwe-GDPR kodwa yalibaziseka. Kuthatha ixesha ukuhlengahlengisa izilungiso kwiPalamente yaseYurophu kwaye akukho mhla wokukhutshwa ngokusesikweni (iibhlog ezimbalwa zomthetho zichaza ukuba mhlawumbi azikho ngaphambi ko-2021) kodwa kuyeza kwaye likho ixesha elincinci lokulungiselela.
Nokuba uyibiza ngokuba yifanele okanye i-flywheel, indlela yakudala engenayo ijongeka ngathi yaphukile.
Ke sibuze iqabane lethu lokuthengisa ukuba senzeni (i ingxoxo ye-imeyile ngegama inokufumaneka kwibhlog yethu), kodwa i-TL: DR: ulibale ukukhulisa, yiya ezantsi kwefaneli, ulungele ukuthenga izikhokelo-amathemba afanelekileyo.
Kwaye andinakuvuma ngakumbi.
Into elungileyo kukuba, i-SEO (yenziwe ngendlela eyiyo), isaphila kakhulu kwaye iyakhaba. Ukukhangela okungokwemvelo kusathatha uninzi lonqakrazo kuthelekiswa neentengiso ezihlawulelweyo (nantsi into idatha yakutshanje yokuchofoza kulonto) kwaye uGoogle ufuna ukuba ufumane i-SEO ngokuchanekileyo kwaye wenze ukuba kube lula kunangaphambili izikhokelo ezinkulu kunye nohlobo oluhlaziyiweyo lweKhonkco lokuKhangela.
Qala ngokujonga isiphumo se-ePR kwishishini lakho. Uxhomekeke kangakanani kwintengiso ye-imeyile? Yimalini indawo ekugcinwa kuyo idatha yakho ye-B2B? Ngaba ungabavumela kwakhona kwangaphambili? Ngaba kufuneka ulungelelanise iinzame zokuzenzekelayo zentengiso ukuze ujolise ekuthengiseni abathengi abakhoyo endaweni yokondla abatsha? Ngaba usebenza ngenkuthalo kwiprofayili yakho yokukhangela yendalo? Kwaye okona kubaluleke kakhulu, uza kwenza ntoni ngoku ufuna ukuba abasebenzisi bavume ukulandelelwa kwindawo yakho? Yenza ukuba amanye amajelo akho ahlelwe kwaye alungele ukuthatha i-slack, kwaye nangaliphi na ixesha xa kuqaliswa i-ePR, nangayiphi na indlela eza kuthatha ekugqibeleni, awuyi kushiyeka uthabatha amaqhekeza.
tags: b2bukwaneliswaummiselo wobuninieuuphawupecrumgaqo wabucalamiselo
U-Luke Budka ngumlawuli kwi-TopLine Comms, i-digital PR kunye ne-SEO arhente.